Archive du 20171002
Tandindomin-doza i Madagasikara Tsy voafehy ny pesta
Andro vitsy taorian’ny nilazan’ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, Mamy Lalatiana Andriamanarivo fa efa voafehy ny fihanaky ny pesta eto Madagasikara dia voaporofo ankehitriny fa ny mifanohitra amin’izay no zava-misy. Miparitaka an-tanàn-dehibe mihitsy ny pesta mpahazo ny tratra na ny « pesta pulmonaire ankehitriny.
Fahazoana 4x4, vola amin’ny malety.. Miresaka ireo depiote
Nanao fanambarana tamin’ny alalan’ny fitafana tamin’ny mpanao gazety tamin’ny herinandro lasa teo ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Malagasy,
Haify Mampihavana Maro no efa nahita asa avy aminy
Nifarana omaly teny amin’ny kianjan’Andohalo, rehefa naharitra roa andro ilay hetsika “Haify Mampihavana”
Taratasin’i Jean Manao kibay an-kelika !
Miarahaba anao amin’ny fo madio aho ry Jean ! Hatramin’izao ve dia mbola tahaka izao foana ny fihetsikao e ?
Analamanga Park “Bungalow” 3 may kila forehitra
May ny ampahany amin’ny toeram-pitsangantsanganana Analamanga Park eny amin’ny lalam-pirenena faha-7 omaly alahady 01 oktobra 2017.
Mari-drefy tsy ara-dalàna Hesorina, hoy ny Minisitry ny paositra
Be loatra ireo onjapeo misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao, raha ny nambaran’ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra, Nepatraiky Rakotomamonjy.
Herinandron’ny AGRO tany Andina Fahombiazana tanteraka
Fahombiazana tanteraka ny fankalazana ny herinandron’ny Agro tany Andina Ambositra ny sabotsy teo.
Apostoly Tsaratsara Milaza fa hitondra filaminana ho an’ny Malagasy
Nivoaka tamin’ny fahanginany rehefa ela tsy henoheno ny Apostoly Tsaratsara sy ny ekipany.
Silamo Ahmadiyya Madagasikara Nahatontosa ny «Jalsa Salana» 2017
Nanatontosa ny «Jalsa Salana» andiany faha-13 teny Andavamamba ny 29 sy 30 septambra 2017 teo ny fikambanana silamo Ahmadiyya eto Madagasikara.
FJKM Betela Fitiavana Mahatsinjo Vita ilay tilikambo mirefy 24 metatra
Tilikambo mirefy 24 m nandaniana vola 20.000.000 ariary no tsangambato fanamarihana ny faha-110 taona niorenan’ny fiangonana Fjkm Betela Fitiavana Mahatsinjo Morarano Chrome.
Edito Mipoitra tsikelikely
Mipoitra tsikelikely ihany ny tandindon’izay mety ho fizotry ny fifidianana hatrehina amin’io taona ho avy io ary na dia hita ho samy miezaka manao izay
“PestePulmonaire” Ahoana ny fitrangany ? Inona no tokony hatao ?
Aretina mahafaty kanefa azo tsaboina raha fantatra ara potoana sy entina eny amin’ny dokotera ny pesta.
Fikarohana ireo voan’ny pesta Tsy andraikitray, hoy ny fanjakana
Mahatratra 24 no maty hatramin’ny fiandohan’ny volana aogositra, ary 101 ny trangana valan’aretina pesta voamarina,
Tsiafajavona Ankaratra Olona 600 nahazo rano fisotro madio
Nahazo paompin-drano fisotro madio ireo mponina ao amin’ny fokontany sy kaominina ambanivohitra Tsiafajavona Ankaratra.
Orinasa kanadianina mitrandraka ao Ambatolampy Ara-dalàna, hoy ny minisitera
Olona 4 ihany sisa no mitsipaka ny fitrandrahana Grafita ataona orinasa kanadianina iray ao Ambatolampy, Ambilaninony, hoy ny tompon’andraikitra iray avy eo anivon’ity orinasa ity.
Rah ckiky Nisy nikasa hamono
Raha somary natahorana ny ain’i Rah ckiky na Razafimamy Christian mpihira omaly maraina dia re omaly tolakandro fa efa mahatsiaro tena izy ary efa niteny.
Niantehitra tamin’ny odigasy Dahalo iray lavon’ny zandary
Tsy mitsahatra ny asan-dahalo any amin’ny faritra Bongolava.
Fahombiazana tanteraka no azo tamin’ilay hetsika Tsena Kristianina nokarakarain’ny Fiangonana FJKM Ambohitantely notanterahina teny amin’ny tanànan’i Voara Andohatapenaka ny faran’ny herinandro teo.